Foomka Codsiga Caawimaada kirada/ijaarka Degdega ah
Ma u qalmaa?
U isticmaal foomkan si aad u bilowdo sidii aad u dalban lahayd caawimaada kirada/ijaarka ee la xiriirta COVID.
U isticmaal hal foom dadka gurigaa degan oo dhan.
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo foomkan? Wac (612) 348-6442. Waxaan leenahay shaqaale ku hadla Somali iyo Spanish oo ku caawin kara.
Ma u baahan tahay in aad la gasho heshiis kale milkiilaha gurigaaga, heshid caawimaad guri oo aan la xiriirin COVID ama talo sharci? Ka wac Tenant Resource Center lambarkan (612) 767-9737.
Waa maxay xaaladaada guri hada?
Mid dooro Waxaan deganahay guri aan leeyahay waxaan deganahay abaartamenti aan kireystay (waxaana ku jiraa heshiis kiro) Waxaan la noolahay dad kale kumana jiro heshiiska kirada Waxaan joogaa hoyga dadka guri la’aanta ah ama banaanka/baabuurkayga
Immisa caruur ah oo ka yar 18 jir baa kula nool?
Immisa qof oo ka weyn 18 jir oo aad adigu ku jirted baa gurigaaga ku nool?
Waa immisa dakhliga/lacagta guud ee soo gashay reerkaaga sanadkii 2020? (waxaa lagaaga baahnaan doonaa in aad keentid warqado cadaymo ah)
1. Dakhliga/lacata guud waxaa ku jira lacagta shaqadaada kaasoo gasha canshuurta ka hor iyo wixii kalee lagaa jaro, sidoo kale lacagaha kaaga yimaada caymiska shaqo la’aanta, naafanimada, taageerada caruurta, ama caawimaada dadweynaha. (Waa inaad keentid dukumentiyo)
Soo geli cadayn dakhligii/lacagta guud ee 2020 (waxaa laga yaabaa inaad ku lfaaqdid dhowr fayl)
Dakhligaagu ma ka hooseeyaa 80% midka ay dowlada dhexe qorshaysay?
Caqabadaha dhaqaale ee hada jira (calaamadee mid walba oo ku khuseeya)
Qof ka mida qoyskeyga ayaa wuxuu qaataa lacagta caymiska shaqo la’aanta.
Dakhlkiga guud ee qoykaygu hoos ayuu u dhacay, waxaan leeyahay kharashyo badan, ama caqabado kale oo dhinaca lacagta ah uuna sababay COVID-19.
Midna ima khuseeyo kuwa kor ku qoran
Qof qoyskaaga ka mida ahi ma ahaa shaqo la’aan 90kii maalmood ee la soo dhaafay ama ka badan?
Caqabdaha guryeynta ee hadda jira (Calaamee mid kasta oo ku haboon)
Qoykaygu wuxuu helay ogaysiis ku saabsan kirada/ijaarka ama koranta, biyaha, qashinka, gaaska oo aanan bixin darteed.
Qoyskagu wuxuu helay ogaysiis guriga laga saarayo.
Gurigaygu wuxuu ku sugan yahay xaalad aan amaan iyo caafimaad toona lahayn.
Weli ma aadan buuxin shuruudihii aad caawimaada ugu qalmi lahayd.
Select one Bloomington Brooklyn Center Brooklyn Park Champlin Corcoran Crystal Dayton Deephaven Eden Prairie Edina Excelsior Golden Valley Greenfield Greenwood Hanover Hopkins Independence Long Lake Loretto Maple Grove Maple Plain Medicine Lake Medina Minneapolis Minnetonka Minnetonka Beach Minnetrista Mound New Hope Orono Osseo Plymouth Richfield Robbinsdale Rockford Rogers St. Anthony St. Bonifacius St. Louis Park Shorewood Spring Park Tonka Bay Wayzata Woodland
Haddii aad degan tahay meel ka baxsan Degmada Hennepin, uma qalantid dhaqaalaha/maalgelinta arjigan lagu helayo. Fadlan la xiriir degmada aad ku nooshahay.
Cinwaanka iimeylka (waxaa loo isticmaalayaa in laguugu soo diro iimeyl xaqiijin ah iyo aqoonsiga aad isticmaalaysid, sidoo kale waa laguugula soo xiriirayaa wixii caawimaad ah)
Ma ku heli kartaa fariimaha qoraalka ah lambarkan?
Ma waxaad u baahanaan doontaa turjubaan marka taleefoon laguugla xiriiriyo?
luqadaha aan hayno
Creole French Fula Hmong Igbo Somali Spanish Swahili Yoruba Zulu Other
Sida aad door bidayso in laguugula soo xiriiro (dhowr sidyood baa dooran kartaa)
Iimeyl (English kaliya)
Qoraal (English kaliya)
Ma qof dumar ah ayaa reerka madixiisa ah?
waxaan doorbiday inaanan ka jawaabin Qoyskaagu ma Hispanic baa?
Fadlan calaamad ku dhig sanduuqa ku xiga jinsiyada(ha) ku haboon qoyskaaga (dhowr ayaa dooran kartaa)
Macluumaadka milkiilaha ama mas’uulka guriga
Waxaan u ogolahay in Degmada Hennepin iyo hay’adaha bulshaduba la soo xiriiraan milkiilaha guriga aan deganahay ama shirkadaha korantada, gaaska, biyaha, qashinka, meeshaan u shaqeeyo ama meelihii kaloo ay uga baahan yihiin xaqiijin arjigayga.
Waxaan ogolahay in ay Degmada Hennepin la wadaagto Mackuumaadka arjigan hay’adaha bulshada ee ka hela dhaqaalaha gobolka, dowlada dhexe iyo meelaha kale gudaha ah ee kaalmeeya guryeynta.
Waxaan cadaynayaa haddii aan ka helo caawimaad meel kale oo iga bixisa xaalada guriga oo degdeg. Waxaan si dhakhso ah ugu soo sheegi doonaa bixiyahayga kaalmada dhaqaale. Waxaan cadaynayaa inaanan weli helin caawimaad dhaqaale oo meel kale ka timi si aan u bixiyo bishan xaalad guri ee degdeg ah.
Waxaan cadaynayaa inaanan weli helin caawimaad dhaqaale oo meel kale ka timi si aan u bixiyo bishan xaalad guri ee degdeg ah.
Waxaa nalooga baahan yahay in aan ku siino Digniinta Tennessen ka hor intaanan kaa codsanin macluumaadkaaga shaqsiga ah sida ku xusan Minn Stat §13.04, subd. 2 Ujeedada ogeysiiskana waa in uu kuu sahlo inaad gaarto go’aan aad ogtahay oo ku saabsan hadii aad dhiibaysid xogta adiga kuu gaarka ah, taasoo lala wadaagi karo haya’daha dowlada, sida Degmada Hennepin iyo Guryanta Minnesota. Xogtan waxaa cid lala wadaagi karaa haduu jiro amar maxkamadeed ama gobolka lasiinayo ama sharci dejin dhowruhu codsado. Waxaa nalooga baahan yahay in aan kugu wargelino xuquuqdaada ku saabsan macluumaadka aan kaa ururinayno ee kuu gaarka ah. Macluumaadka aan kaa ururinayno wuxuu sharci ahaan u kala soocmaa mid guud ama dadwayne (kaasoo uu qof kastaa arki karo) mid gaar ah (dadweynuhu aanay awood u lahayn inay arkaan, laakiin adigu aad arki kartid), ama qarsoodi ah (xitaa adigu ma arki kartid macluumaadka). Maadaama aad tahay kan codsanaya kaalmadan, inta badan macluumaadka lagaa codsaday ee kugu saabsan wuxuu noqonayaa mid ka gaarka ah. Sida sharciga ah Khasab kuguma aha in aad dhiibtid macluumaadka lagu waydiistay. Hase yeeshee hadii aadan dhiibin, waxaa laga yaabaa in aadan helin addeegyada iyo waxyaabaha kale ee aad dalbanayso. Hadii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan digniintan. Fadlan la soo xiriir shaqaalaha hay’ada.
Calaamayntayda sanduuqan, waxan qirayaa in aan akhriyey fahmayna Digniinta Tennessen eek or ku qoran.